Nke a bụ afọ mbụ m na ọgbakọ NRA. Wezuga inwe mmega ahụ ọzọ karịa nke m nwere, site na ịga ije, ihe nkiri ahụ abụghị nnukwu egwuregwu teknụzụ. Ikekwe teknụzụ kachasị mma (ma e wezụga Patronpath) bụ ngosipụta dijitalụ, nke a maara dị ka akara ngosi dijitalụ. Ihe ngosi dijitalụ bụ nnukwu ihe ngosi HDTV nke gosipụtara mgbasa ozi zuru ezu (vidiyo na eserese) ma nwee ike ịhazigharị ozi dịka ọ dị mkpa. N'ime ụlọ ọrụ nri, enwere ụfọdụ atụmatụ dị jụụ - dịka ijikọ ozugbo